nattalin: ရခိုင်လူမျိုးနှင့် မြန်မာစာ
ရခိုင်လူမျိုးနှင့် မြန်မာစာ ဖြစ်ပေါ်လာပုံ အကြောင်း သိကောင်းစရာ
ရခိုင်လူမျိုးနှင့်မြန်မာစာ ဟူသော ဆောင်ပါးသည် ရခိုင်လူမျိုးနှင့်။ မြန်မာစာ မည်သို့ မည်ပုံ ဆက်စပ်နေ သည်ကို သိရှိနိုင်ကြစေရန် ရည်ရွယ် ချက်ဖြင့် ဤဆောင်းပါး ကို ရေးသား ရခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ရခိုင်လူမျိုးနှင့် မြန်မာစာ မြန်မာစာနှင့် ရခိုင်လူမျိုး ကိုမည်သည့်အခါမျှ ခွဲခြား၍ ရလိမ့်မည်မဟုတ်။ အဘယ်ကြောင့် ဆိုသော် မြန်မာစာကို ရခိုင်လူမျိုးတို့က မိမိတို့၏ ကိုယ်ပိုင်စာပေ´´ အနေဖြင့် အသိ အမှတ် ပြု ထားသောကြောင့် ဖြစ်၏။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် မြန်မာစာဟု သတ်မှတ်ခံ ထားရသော ´အက္ခရာစာပေ´´ ကို ရခိုင်လူမျိုးတို့က မိမိတို့၏ ´´ရခိုင်စာဟူ၍သာ သိနေကြပါသည်။ စာပေကို ရေးသားသည့် အခါ၌ ရခိုင်စကား အပြောအသုံး အနှုန်း ဖြင့် ရေး သားခြင်း၊ စာပေအသုံးအနှုန်းဖြင့် ရေးသားခြင်းဟူ၍သာ ခွဲခြားထား သည်။ အက္ခရာ စာပေ အနေဖြင့် မူ သည် အက္ခရာသည် စာပေဖြင့်သာရေ သားနေကြခြင်း ဖြစ်ပါ သည်။ ယင်းစာ အမျိုးအစားကို ရခိုင်တို့က ´ရခိုင်စာ´(သို့မဟုတ်) ရက္ခ၀ဏ အက္ခရာ´ ဟုအမည် ပေးကာ ခေါ်ဝေါ်သ မှုပြုနေကြသည်ကို လည်း တွေမြင်နိုင်ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် လူမျိုး ပေါင်း´၁၃၅´ မျိုးရှိကြသည့် အနက်´ မြန်မာစာ အရေး အသားကို မည်သည့်လူမျိုးတို့ က´ရှေ့ဦးစွာ စတင်ရေး သား´ခဲ့ကြသည်ကို လေ့လာစူးစမ်းဖို့ အချိန်တန်ပြီ ဟု စာရေး သူယူဆပါသည်။
အကယ်၍ အဖြေမှန် ထွက်ရှိခဲ့ပါလျှင်လည်း အားလုံး သဘောထားကြီးစွာဖြင့် လက်ခံ အတည်ပြု ပေးကြဖို့ ကိုလည်း အနူးအညွတ် မေတ္တာရပ် ခံလိုပ်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း၌ကား ရှေ့က ရခိုင်လူမျိုးတို့တွင် ´ရခိုင် စာ´၊ မွန်လူမျိုးတို့ တွင်´မွန်စာ´၊ ပြူ(ပျူ) လူမျိုးတို့ တွင် ´ပြူ(ပျူစာ)´ ဟူ၍ ကိုယ်ပိုင် စာပေအသီးသီး ရှိခဲ့ကြ သည်အနက်သည် ဆောင်းပါးသည် ´မွန်နှင် ပျူစာ´ကို လေ့လာဆန်းစစ်မှု မပြုတောပဲ´မြန်မာစာဟု သတ်မှတ်ခံထားရ သော´ရခိုင်စာ´ကိုသာ နှစ်ဖက် နှိုင်းယှဉ်၍ ဝေဖန်သုံးသပ် တင်ပြသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။ နှစ်ဖက်နှိုင်းယှဉ်ရာ၌ နှစ်ဖက်စလုံးမှ ထင်ရှာပြီးခိုင်မာသော သမိုင်းဆိုင်ရာ ခေတ်ပြိုင်အထောက်အထား တစ်ခုစီကိုသာထုတ်နှုတ်၍ ရေးသားတင်ပြသွားပါမည်။
အထောက်အထားရှိတိုင်း အကျယ်တ၀င့် တင်ပြဖို့ဆိုသည်မှာ မဂ္ဂဇင်းက စာမျက်နှာနေရာ ပေးနိုင် သည် မဟုတ်ပါ။ ရခိုင်နှင်မြန်မာ ခေတ်ပြိုင်မှုကို ရှာကြည့်ခြင်း မြန်မာစာပေ´ကို ရေးသား နေကြ သည့်´ရခိုင် လူမျိုးနှင့် မြန်မာလူမျိုး´´တို့၏ ခေတ်ပြိုင်အချိန်ကာလကိုရှာကြည့်သော် ဤသို့တွေ ရ၏။
ရခိုင်လူမျိုးတို့တွင်လည်း ဒွါရာဝတီခေတ်၊ ဝေသာလီခေတ်၊ ဓည၀တီခေတ်(ပ၊ဒု၊တ)ခေတ် ၊ဝေသာ လီကျောက်လှေကားခေတ်၊ လေးမြိုခေတ်၊ မြောက်ဦး(ပ၊ဒု၊တ)ခေတ်ဟူ၍ ခေတ်(၆)ခေတ် ထွန်း ကားခဲ့ သည်ကို တွေ့ရှိနိုင်သည်။ သို့သော်အချိန်ကာလ ကြာမြင့်ပုံခြင်းတော တူနိုင်မည် မဟုတ်ပါ။ ယင်းတို့အနက် မြန်မာတို့၏ ပုဂံခေတ်နှင့် ရခိုင်တို့၏ လေးမြို့ ခေတ်မှာ ခေတ်ပြိုင်ဖြစ်ကြ၏။ မြန်မာတို့ ဘက်ကပုဂံ ၏ထင် ရှား သော´ရာဇကုမာရ် ကျောက်စာခေါ်မြစေတီ ကျောက်စာ´´ကို ခိုင်မာသော အထောက် အထားအဖြစ် တင်ပြမှာဖြစ်ပြီး၊ ရခိုင်တို့ဘက်က စစ်တွေမြို့ ခေါင်းလောင်း ကျောင်းတိုက်ရှိ လေးမြို့ခေတ်´ရခိုင် ဘုရင်မင်းရင်ဖြူ´ သွန်းလုပ်ပူဇော်ခဲ့သော ဘုရား၏ ´စမ္မခဏ်း ကမ္မည်းစာ´ကိုခိုင်မာသော အထောက် အထား အနေဖြင့် တင်ပြသွားမှာ ဖြစ်ပါသည်။
ကြာ၊ မိုး၊ အံ၊ ပုဂံ တည်´ဟူသောဆောင်ပုဒ်အရ ပျဉ်ပြားမင်း (အေဒီ-၈၄၆ မှ ၈၇၈)ထိသည် ယခုလက်ရှိ ပုဂံမြိုကို တည်ချိန်မှာ ကောဇာ-၂၁၁-ခု၊ ခရစ်အေဒီ ၈၄၉ ခုဖြစ်၏၊။ ပုဂံ ပျက်ချိန်ကား´စောမွန်နစ်မင်း´(အေဒီ.၁၃၂၅ မှ ၁၃၆၉) လက်ထက်တွင် ဖြစ်လေ ၏။ ပျဉ်းပြား မင်းသည် ပုဂံမြိုကို တည်ဆောက်နေသည် အချိန်တွင် ပုဂံ၌ ´ထေရ၀ါဒ ဗုဒ္ဒသာသ နာ´´ မရောက်ရှိသေး၊ အလားတူ´မြန်မာစာ´ဟူသော စာပေရေးသားမှု အတတ် ပညာသည် လည်း လုံးဝမရှိသေး သည်ကို တွေ့ ရ၏။ ပုဂံမြို့၌ ပျဉ်ပြား မင်းလွန်ပြီးနောက် တန်နက်မင်း(အေဒီ-၈၇၈-၉၀၆)၊ ၄င်းနောက် စလေငခွေး မင်း (အေဒီ ၉၀၆-၉၁၅)၊ ၄င်းနောက် သိန်းခိုမင်း (အေဒီ ၉၁၅-၉၃၁)၊ ၄င်းနောက် ညောင်ဦး စောရဟန်းမင်း (တောင်သူမင်းကြီး) (အေဒီ-၉၃၁-၉၆၃) ၄င်းနောက်ကွမ်းဆော် ကြောင်ဖြူမင်း(အေဒီ-၉၆၄-၉၈၆) ၄င်းနောက် ကျည်စိုးမင်း(အေဒီ-၉၈၆-၉၉၂) ၄င်းနောက် စုက္ကတေမင်း (အေဒီ-၉၉၂-၁၀၁၇) ၄င်းနောက် အနော်ရထာမင်း(အေဒီ-၁၀၄၄-၁၀၇၇) လက်ထက်မှ ထေရ၀ါဒ ဗုဒ္ဒသာသနာကို မွန်ရဟန်းတော် ရှင်အရဟံ၏ အကူအညီဖြင့် တည်ဆောက်ခဲ့ရ၏။ ယင်းအချိန်ထိ ´ပုဂံ´၌ ´မြန်မာစာ´´ ဟူသော အရေး အသားမရှိသေးချေ။
မွန်လူမျိုးတို့၏စာပေကိုသာ မွန်ပညာရှင်မျာ၏ အကူအညီဖြင့် ရေး သားနေကြ ရလေ ၏။ အနော်ရထာမင်း လွန်ပြီးနောက် စောလူးမင်း (အေဒီ-၁၀၇၇-၁၀၈၄) ၄င်းနောက် ကျန်စစ်သားမင်း (အေဒီ-၁၀၈၄-၁၁၁၃) လက်ထက်တွင် ´´ဇေယျခေတ္တရာ´´အမည်ရှိသော သားတော် ´ရာဇ ကုမာရ်´ သည် ပုဂံ၌´ မြစေတီဘုရား´ကိုတည်၏။ မြစေတီဘုရား၌ သူ၏ ကုသိုလ်တော် မှတ်တမ်း ကို ´ပါဋိ၊ မြန်မာ၊ မွန် ၊ပြူ´ ဟူ၍ ဘာသာလေးမျိုးဖြင့် ကမ္မည်းစာ ရေးထိုး စေခဲ့ပါသည်။
ရခိုင်တို့၏လေးမြို့ခေတ်သည် အေဒီ ၈၁၈ မှ ၁၄၃၀ ထိကြာမြင့်ခဲ့သည်ကို တွေ့ရှိရ ၏။ လေးမြို့ခေတ်ဆို သည်မှာ အဉ္စနနဒီမြစ်၏ ၀ဲယာ၌ ပဉ္စာမြို့ ပုရိန်မြို့ နေရဉ္စ၇ာ တောင်ငူမြို့လောင်းကြက် မြို့ ဟူ၍ မြို့လေးမြို့ တည်ရှိခဲ့သည်ကို အကြောင်းပြု၍ ´လေးမြိုခေတ်´ ဟုခေါ် တွင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ မြန်မာတို့၏ ပျဉ်ပြားမင်းသည် ယခုလက်ရှိ ´ပုဂံမြို့´ ကိုမတည် ဆောက်ရသေးမီ(၃၁)နှစ်အလိုက လေးမြို့ခေတ် ရခိုင်ဘုရင် ´ခေတ္တသင်မင်း´ သည် ပဉ္စာမြို့´ ကိုသာသနာ၁၃၆၂ ခု၊ ကောဇာ ၁၈၀-ခု၊ (အေဒီ-၁၈၁) တွင် တည်ဆောက် ထားပြီးဖြစ်နေပါသည်။
ရခိုင်တို့၏လေးမြိုခေတ်´ခေတ္တသင်မင်း´ လက်ထက်တွင် ထေရ၀ါဗုဒ္ဒ သာသနာ ထွန်းကားနေမှု ကို မဆိုထား ဘိ၊ လေးမြိုခေတ်၏ အထက်က ဝေသာလီကျောက်လှေ ကားခေတ် (အေဒီ-၃၂၇-မှ ၈၁၈ထိ) တွင် လည်းကောင်း တတိယဓည၀တီခေတ် (ဘီစီ-၅၆၉ မှ အေဒီ ၃၂၆ ထိ) တွင် ၄င်း ထေရ၀ါ ဒဗုဒ္ဒသာသနာနှင့်အတူစာပေယဉ်ကျေးမှု အနုပညာများ ထွန်းကားလျှက်ရှိနေပြီဖြစ်ကြောင်း ယုံမှားသံသယမရှိ ခိုင်မာသော အထောက်အထားများက သက်သေပြု လျှက်ရှိနေကြပြီဖြစ်ပါသည်။
ယင်းတိုအနက် လေးမြို့ခေတ် (အေဒီ-၈၁၈-မှ ၁၄၃၀ထိ) ပဉ္စာမြိုတည်´ခေတ္တသင်မင်း´မှ(၃)ဆ က်မြောက်´ ဘုရင်မင်းရင်ဖြူ´ လက်ထက် (အေဒီ-၈၄၃ မှ ၈၇၃ ထိ) အေဒီ ၈၄၇တွင် သွန်းလုပ်ပူဇော်ခဲ့သော ဗုဒ္ဒဆင်းတုတော်(ဥာဏ်တော်အမြင့် ၁ပေ ၂.၃ လက်မ၊ ယခုအခါ စစ်တွေမြို၊ ခေါင်းလောင်းကျောင်းတိုက်တွင် ကိန်းဝပ်လျှက်ရှိသည်၊။) ၏´စမ္မခဏ်း ကမ္မညာ်းစာ´ ကို သာ ရခိုင်စာပေဘက်က ခိုင်မာသော အထောက်အထား တစ်ခုအနေဖြင့် တင်ပြသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
အဆိုပါဘုရား၏ စမ္မခဏ်စာမှာ ယခုခေတ်´မြန်မာစာ´ဟုသတ်မှတ်ခံထားရသော´ရခိုင်စာ´ အရေး အသားဖြင့် ရေးထိုးမှတ်တမ်းတင်ထားသည်ကို အောက်ပါအတိုင်း တွေရှိရသည်၊´ သက္ကရာဇ် ၉၊ကဆုန်လဆန်း ၆ရက်၊ တနင်္လာ၅ါးနာရီ ကျော်သော..ရောက်…ကြီးသွန်းအဲ သည်။ ငင်္မင်္ရဖြူကောင်းမှုဘုရား ပဉ္စလောစာ ပြီးပြည့်စုံသည်၊ ဘုရားပြုသှောဝ် အကျိုးဝ်အားဖြင့် ဘုရားမချွတ် ဖြစ်စေသှော…..။ဟူ၍ ရေးထိုးထားပါသည်။
အထက်ဖေါ်ပြပါ ဘုရား၏´စမ္မခဏ်ကမ္မည်းစာ´ကို ပြည့်စုံအောင် ဖြည့်စွက် ဖတ်ရှုသော် အောက်ပါအတိုင်းဖြစ် ပါသည်။
သက္ကရာဇ် ၂၀၉၊ ကဆုန်လဆန်း ၆ရက်၊ တနင်္လလာနေ့ ၅ နာရီကျော်သော (အချိန်) ရောက်(သော အခါ) ကြေးသွန်းအပ်သည်။ ငါမင်းရင်ဖြူကောင်းမှု ဘုရားကို ပဉ္စလောဟာဖြင့်(သွန်းလုပ်)ပြီးပြည့်စုံသည်။
ဘုရားပြုသော အကျိုးအားဖြင့် ဘုရားမချွတ်ဖြစ်စေသော်´ ဟူ၍ဖြစ်ပါသည်။ လေးမြိုခေတ် ရခိုင်ဘုရင် မင်းရင်ဖြူသည် အထက်ဖေါ်ပြပါ ဘုရား၏ ´စမ္မခဏ် ကမ္မည်းစာ´ ကို ရက္ခ၀ဏအက္ခရာ-ရခိုင်စာ´ဖြင့် ရေးထိုးခဲ့သော နှစ်မှာ ကောဇာ ၂၀၉ခု၊ ခရစ်အေဒီ ၈၄၇ ဖြစ်ရာ မြန်မာတို့ယခုလက်ရှိ ပုဂံမြို့ကို မတည်ဆောက်ရသေးမီ (၂) နှစ်အလိုက ဖြစ်ပါသည်။
သို့ဖြစ်၍´ရာဇကာမာရ် ကျောက်စာခေါ် မြစေတီကျောက်စာ´ သည် ယင်းအချိန်၌ ရှိဖို့မဆိုထားနှင့် ´ပုဂံမြို့ ပင်မရှိသေးသောကြောင့် ´မြန်မာ စာပေ´ အရေးအသားမှာလည်း မြန်မာတို့အနေဖြင့်´ အိမ်မက်တောင် မက်ဖို့´ မလွယ်ကူသေးချေ။
မြန်မာသမိုင်းဆရာများက မြန်မာသည်´ပြူလူမျိုး´ ကဆင်းသက် လာသူ များဟု ခံယူထားကြ၏။ ယင်းသို့ ဆိုလျှင် အဘယ်ကြောင့် မြန်မာတို့သည် ´ပြူစာ´ကို မိခင်စာပေအဖြစ် ရပ်တည်အောင် မဆောင်ရွက် နိုင်ကြ ခဲ့ပါသနည်း? ဟု မေးစရာ ရှိနေပါသည်။ ယခုအခါ ပြူလူမျိုးနှင့် ပြူစာပေမှာ မြန်မာမြေ မျက်နှာပေါ်က လုံးဝဆိတ် သုဉ်းပျောက်ကွယ် သွားကြပြီဖြစ်၏။ အချိူ သမိုင်းဆရာများက မြန်မာစာသည်´မွန်စာ´က ဆင်း သက် လာသော စာဟုကြံဆကြပြန်၏။ ထို့သို့ဆိုလျှင် လည်း အဘယ်ကြောင့် မြန်မာတို့သည် ´မွန်စာ´ ကိုနိုင် ငံသုံးစာပေအဖြစ် ရပ်တည်အောင် မဆောင်ရွက် နိုင်ခဲ့ကြပါ သနည်း။ ဟုမေးစရတွေ အများကြီး ရှိနေပါသည်။ အမှန်က ´ပြုစာ´ သည် ပြူလူမျိုးတို့နှင့်သာ တိုက်ရိုက်သက်ဆိုင်နေပြီး ´မွန်စာ´ သည် လည်း မွန်လူမျိုးတို့နှင့်သာ တိုက်ရိုက် သက်ဆိုင်နေသော စာပေဖြစ်ကြောင်း လေ့လာ တွေ့ရှိ ရပေသည်။ ယနေ့ မျက်မှောက်ခေတ် ´မြန်မာစာ´ ဟု သတ်မှတ် ခံထားရသော ´ရခိုင်စာ´ သည်လည်း ရခိုင်လူမျိုး တို့နှင်သာ တိုက်ရိုက် သက်ဆိုင်ခဲ့ကြသဖြင့် ရခိုင်လူမျိုးတို့သည် ကိုယ့်စာပေကို ခေတ် အဆက်ဆက် တည်တံ့အောင် ထိန်းသိန်း စောင့်ရှောက် လာခဲ့ကြ သည်မှာ ခေတ်တိုင်း ခေတ်တိုင်းတွင် ပေါ်ထွန်းခဲ့သော ´ရခိုင်စာပေ အထောက် အထားများ´က သက်သေပြုလျှက် ရှိပေတောသည်။
အမှန်ကယင်း´ပြူစာနှင့်မွန်စာ´နှစ်မျိုးစလုံးသည်ပင်လျှင် မြစေတီ ကျောက်စာ၌ ပါရှိနေပြီးဖြစ်သောကြောင့်၊ ယင်းစာနှစ်မျိုးက ဆင်းသက် လာသောစာဟု သတ်မှတ်နေကြခြင်းသည် လုံးဝယုတ္တိမရှိချေ။
အဘယ်ကြောင့် ဆိုသော် စာပေတို့မည်သည် အချိန်ကာလတစ်ခုတည်း ၌ နေ့ချင်ညချင်းပြောင်း လွဲရိုး ထုံး စံမရှိသောကြောင့်တည်း.။ ပြောင်းလဲဖို့ ဆိုသည်မှာလည်း ခေတ်ကာလ အတော်ကြာမြင့်အောင် စောင့်ဆိုင်း ရပေ လိမ့်မည်။ မြစေတီကျောက်စာ (´မြန်မာ) သည်ပြူစာနှင်မွန်စာက ဆင်းသက် လာသော စာ မဟုတ်ကြောင်းကို ´မြစေတီကျောက်စာ´ကပင်လျှင် အခိုင်လုံဆုံး သက်သေပြု လျက်ရှိနေပေတော့ သည်။
အဖြေမှန်ကို သိရှိလိုပါက လေးမြို့ ခတ်၊ပဉ္စာမြို့(၁၂)ဆက်မြောက် မင်းဘီလူးကို အေဒီ-၁၀၆၈တွင်´၀ရောင်းငှက် အသင်္ခယာ´အမတ်က လုပ်ကြံ သဖြင့် ကွယ်လွန်သည်။ မင်းဘီလူး၏သားဖြစ်သူ အိမ်ရှေ့ မင်းသား´ မင်းရဲဘယ´ သည် မိဖရား ´စောပေါက် ညို´ပေါက်ညိူမြ)နှင့်အတူ ရခိုင် ပညာရှိ အမတ်အချို့လိုက်ပါလျှက် ´ဘူးရွက်မညှိုးလမ်း´ က အရှေ့ ပုဂံပြည်သို့ ထွက်ပြေးကာ ´အနော်ရထာ´ မင်းထံခိုလှုံခဲ့ရသည်။ အဆိုပါ မင်းရဲ ဘယမိသားစု တို့သည် ပုဂံပြည်၌ နှစ်ပေါင်း(၃၅) နှစ်ခန့်ကြာမြင့်အောင် အမှုတော် ထမ်းရွက်ကာ နေထိုင်ခဲ့ကြရသော သမိုင်းကြောင်းကို လည်းကောင်း၊ ပုဂံမင်းအနော်ရထာအား ´ရခိုင်ဝေသာလီ´က´ပဉ္စ ကလျာဏီ မင်းသမီး´ကိုဆက်သရာတွင် ´ကျန်စစ်သား´ ကို ရသည် ဟူသော သမိုင်းကြောင်းကို လည်းကောင်း၊ ကျန်စစ်သားသည် မြေးတော် အလောင်းစည်သူကို ပုဂံထီးနန်းကိုပေးအပ်ပြီး´ဇေယျခေ တ္တရာ´အမည်ဖြင့် သားတော် ရာဇကုမာရ် မင်းသားကို´ ဓည၀တီနှင့် တောင်စဉ်ခုနှစ်ခရိုင်´(မြန်မာရာဇ၀င်အလို) ကိုစားစေ ခဲ့သော သမိုင်းကြောင်းကိုလည်းကေင်း၊ ပုဂံမင်းတို့အထံ၌ ရခိုင်သားများ အမှုတော်ထမ်းရွက်ခဲ့ကြပြီး အချို့က ဘုရား အလှူဒကာများ အဖြစ် ခံယူကာ မြန်မာတို့၏ နယ်မြေ၌ ရှိနေခဲ့ကြသည် ဟူသော သမိုင်းကြောင်းကို လည်းကောင်း၊ မြန်မာလူမျိုးတို့ကို ရခိုင် လူမျိုး တို့က ´အောက်သား´ဟုနာမည်ပေး ကာ နှစ်ပေါင်းများစွာ ခေါ်ဝေါ် လာခဲ့ကြသည့် သမိုင်းကြောင်းကိုလည်းကောင်း၊ ´ရဟန္ဒာထွေး(ခေါ်) အသျှင် ဒိဗစက္ခု´ အမည်ရှိသော ရခိုင်တို့ ဝေသာလီက ရဟန္တာ အသျှင် သူမြတ်သည် ဥပဇ္ဈာယ် ဆရာ´ မဟိဒ္ဒပါလမထေရ်မြတ်´ ၏ စေလွတ်ချက် အရ ပင်းယ မြိုသို့ ကြွရောက်၍ သာသနာပြုခဲ့ရသော သမိုင်းကြောင်းနှင့် ပင်းယတစ်စီးရှင် သီဟသူ၏ မင်းဆရာအဖြစ် ကိုးကွယ် ဆည်းကပ်မှုကို ခံယူခဲ့ရသော သမိုင်း ကြောင်းကို လည်းကောင်း ချန်လှပ်၍ ထားကြမည် ဆိုပါက အဖြေမှန် ပေါ်ပေါက်နိုင် လိမ့်မည် မဟုတ်ချေ၊
ပုဂံခေတ် ကျောက်စာများ၌ ပါရှိနေသော အချို့စကားလုံးများသည် ရခိုင် လူမျိုး တို့၏ နေ့စဉ် သုံး ဝေါဟာရ များဖြစ်နေကြောင်း အောက်ပါ စကား လုံးများကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် သိရှိနိုင်ပါသည်။
စသောဝေါဟာရများကို ယနေ့ခေတ် မြန်မာတိုပြောဆိုနေကြသေးလား? ဟုမေးလျှင် ပြောဖို့မဆိုထားနှင့် အဓိပါယ်ကို သိရှိအောင်မနည်း ကြိုးစား ကြရမည်ဟု ထင်ပါသည်။
အဓိပါယ်ကို-၁၁၁၃ ခုတွင် ရေးထိုးခဲ့သောမြန်မာတို့၏ ရှေ့အကျဆုံးဖြစ်သည့် မြစေတီကျောက်စာ ထက် လေးမြို့ခေတ် အေဒီ-၈၄၇ ခုတွင် ရခိုင်ဘုရင် မင်းရင်ဖြူ သွန်းလုပ်ပူဇော်ခဲ့သော ကောင်း မှုတော်ဘုရား၏ စမ္မခဏ် ကဗ္မည်းစာက နှစ်ပေါင်း(၂၆၆) နှစ်စော၍ ရှေ့ကျနေကြောင်း သိရှိရပါသည်။
ထို့ကြောင့်´မြန်မာနိုင်ငံတွင် မြန်မာစာအရေးအသားကိုမည်သည့်လူမျိုးတို့က ရှေ့ဦးစွာစတင်ရေး သားခဲ့ကြပါသနည်း?
ဟူသော အမေးဖြစ်ပေါ်ခဲ့လျှင် ဤဆောင်းပါးစာတမ်းက အထိုက်အလျှောက် အဖြေပေးနိုင်လိမ့် မည် ဟုယူဆပါသည်။
´ရခိုင်လူမျိုးနှင့်မြန်မာစာ´ မှာ မည်သည့်အခါမျှ ခွဲခြား၍ ရလိမ့်မည်မဟုတ်။
စကားပြောဟန်ရေးနည်းနှင့်စာ အသုံးရေးနည်းသာ ခြားနားချက်ရှိနေသည်။ စာပေအက္ခရာမှာ အတူတူပင် တည်း။ သို့ဖြစ်၍ ယနေ့ မျက်မှောက်ခေတ် ´မြန်မာစာ´ ဟုသတ်မှတ်ခံထားရသော ´ရခိုင်စာ´ ကို ရခိုင် လူမျိုးတို့က မိမိတို့၏ ´ကိုယ်ပိုင်စာပေ´ဖြစ်ကြောင်းအကြွင်းမဲ့ခံယူထားကြသည်ကို သုတေသနပြု ကာ ရေးသားတင်ပြလိုက်ရပေသည်။